Inter Milan iyo Bayern Munich oo wada doonaya xiddig ay Kooxda Manchester City diyaar u tahay inuu tago – Gool FM
(Manchester) 05 Feb 2020. Kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska fasaxo suuqa xagaagaan daafaca midig ee Joao Cancelo, kaddib markii ay hal xilli ciyaareed ka hor ka soo iibsadeen Naadiga Juventus.
Cancelo ayaa Man City ku yimid 27 milyan oo gini oo lagu daray Danilo xagaagii 2019, laakiin waxa uu ku dhibtooday inuu soo jiito indhaha macallinka Kooxdiisa cusub iyo waliba jamaahiirta, isagoo 7 kulan oo qura u saftay kooxdiisa kulamada Premier League.
Sida laga soo xigtay Wargeyska Daily Mail, Inter Milan iyo Bayern Munich ayaa ka fiirsanaya inay suuqa xagaaga u dhaqaaqaan xiddiga reer Portugal, iyadoo Man City ay ku qiimayso 60 milyan oo gini.
Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay xiisaynaysay u dhaqaaqista xiddigan 25-sano jirka ah suuqii dhawaan xirmay ee bisha Janaayo, laakiin waxa ay ku guuldarreysteen inay soo gabagabeeyaan heshiiska laacibkan difaaca midig ka ciyaara.
Warbixintu waxay intaas ku dareysa in Cancelo uu sidoo kale waqtigan ka fiirsanyo halka uu sal dhigan doono iyo kooxda uu dooran doono, maadaama uusan mustaqbalkiisa ka dhex ifeynin kooxda Muwaadiniinta lagu naynaaso.
Cancelo ayaa 16 kulan u saftay xulka qaranka Portugal tan iyo markii uu xulka waa wayn ka mid noqday sanadkii 2016-kii, isagoo u dhaliyay saddex gool.